Natiijada doorashooyinkii Soomaaliland oo wali la sugayo | KEYDMEDIA ONLINE
Natiijada doorashooyinkii Soomaaliland oo wali la sugayo
Waxaa weli degaannada Soomaliland ka socda tirinta codadka doorashooyinkii isku sidkanaa ee Golaha Wakiilada iyo Glaha degaanka ee maalintii ugu danbeysay bishii May ee dhawaan dhamaatay ka dhacday degaannada Maamulkaas.
HARGEYSA, Soomaaliland – Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda soo gaba-gabeeyaan tirinta codadka doorashada gobollada Soomaalinad oo dhan, oo dib ugu dhacaday xilligii la filayay in lagu dhawaaqo natiijada rasmiga ah.
Qaar ka mid ah degmooyinka ayaa laga soo sheegay is qabqasi iyo muran ka dhex qarxay xubnaha Komishinka doorashooyinka sida degmada Saylac ee Gobolka Owdal, oo saddex ka mis ah cod tiriyayaashii loo saaray bannaanka, iyadoo tirintii socoto.
In ka badan hal Milyan oo muwaadiniin reer Somaliland ah ayaa ka qeyb qaatay cod bixinta doorashadii Baarlamaaniga ahayd ee ugu horreysay ee Soomaaliland ka dhacda tan iyo 2005, iyadoo 246 musharrax ay u tartamayaan 82 kursi.
Sidoo kale codbixiyeyaasha ayaa ayaa dooranayay, 249 kursi oo Wakiillada Goloyaasha Degaanka ah, isla-markaan ay ku tartamayaan 747 Musharax, oo ka kala socda dhamaan lixda gobol ee Soomaaliland, kuwaas oo kala ah Maroodi-jeex, Togdheer, Sanaag, Saaxil, Sool iyo Awdal.
Doorashooyinka Soomaaliland waxaa goob-joog ahaa kormeerayaal ka socda dalalka gobolka, iyo daneeyayaasha kale ee caalamiga ah, waxaana kormeerka xubin ka ah Madaxweynihii hore ee wadanka dhaca Galbeedka Afrika ee Sierra Leone, Ernest Koroma.
Wixii ka soo kordha doorashooyinka Soomaaliland kala soco Keydmedia Online.